MUUQAAL: C.wali Gaas oo ka hadlay DP-World Iyo Boosaso, Arinta Khaliijka, Dawladda Dhexe iyo Qalbi-dhagax - Hablaha Media Network
MUUQAAL: C.wali Gaas oo ka hadlay DP-World Iyo Boosaso, Arinta Khaliijka, Dawladda Dhexe iyo Qalbi-dhagax
HMN:- Cabdiweli Gaas Madaxweynaha Maamulka Puntland ayaa bixiyey waraysi dhinacyo badan Taabanaya, Waxaana wax laga waydiiyey Guud ahaanba Xaalada Soomaaliya Iyo Arimaha Maamulka Puntland.
Isagoo u jawaabaya dadka kasoo horjeeda Wareejinta Dekadda Boosaaso ayuu yidhi “Horta odayaal ha odhan, odayaal degaan. Odayaal waxaa la yiraahda Nabadoono, Isimo, Cuqaal, Ganacsato, dadka wax ku oolka Bulshada ah. Ma’ahan waxaa meesha ka hadlaya, dad aan naqaano weeye adeer macaane. aan waxba aan rabin waaye, horumar-diid, waxaan ku tilmaami karaa waa horumar-diid, waxkale oo ay yihiin ma ay jirto”.
Sidoo kale Mar uu ka hadlay Go’aanka ayku Raaceen Imaaraadka iyo Sucuudiga Ayuu yidhi “Anagu hada Qadar wax xiriir ah oo aanu leenahay majirto, ma naqaan meel ay ku taallo, xiriir lama lihin, Sheikh Atam oo abuuray dhibaatada Galgala ka jirta uun bay hada haysaa, waxkale oo naga jiraahi hada majiraan.
Arrinta dhacdayna dhex dhexaadnimo maahan, runtii waxaa moodaa Dowladda dhexdhexaadnimadeedu waxay taageeraysa mowqifka Qadar, ayaad mooda inay taageerayso”
Mar wax laga waydiiyey Arinta C.kariim Qalbi dhagax oo Wasiir ka tirsanaa Puntland uu xilkiisa ku waayey, Ayuu sheegay inuusan ka hadlayn oo aysan Qusaynin.